Posted by သက်ဝေ at 5:20 PM
မဒမ်ကိုး July 17, 2012 at 5:41 PM
ဒန်တယ် ဒန်တယ် လွှတ်ဒန်တာ မမး))
သက်ဝေ July 17, 2012 at 5:43 PM
ကျေးဇူး ညီမ... ဒီလို ဒန်တဲ့ ကော်မန့်မျိုးပဲ ဖတ်ချင်နေတာ (ဟု ထင်သည်)
JuneOne July 17, 2012 at 5:47 PM
မြသွေးနီ July 17, 2012 at 5:57 PM
သို့သော် ကိုယ်တိုင်က မဒန်တတ်ပေ...
ထို့ကြောင့် အစ်မသက်ဝေ၏ ဒန်ချက်ကို ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါသည်။
( Comment ရေးရင်နဲ့တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒန်သလိုလို ခံစားလာရတယ်:)
သက်ဝေ July 17, 2012 at 5:59 PM
အဲဒါပဲ ညီမ... အဲဒါပဲ... အဲဒါပဲ...
အမလိုချင်တာလဲ အဲဒါပဲ... (ဟု ထင်သည်) :D :D :D
mstint July 17, 2012 at 6:12 PM
ပိန်းတယ်ပြောလည်း ခံပါ့မယ် မသက်ရေး))
ဘာကိုဆိုလိုတာလည်းဆိုတာ သိသေးဘူးကွယ် :P
balagyi July 17, 2012 at 6:12 PM
good. whatabout de ja vu ?
balagyi July 17, 2012 at 6:13 PM
Thandar Lwin July 17, 2012 at 9:13 PM
ဒန် မှ ဒန် .ဒန်တန်တန် ဘဲ မမ ရေ...:D
Thandar Lwin July 17, 2012 at 9:14 PM
Nyi Linn Thit July 17, 2012 at 9:45 PM
ပထမတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို hallucinate ဖြစ်နေတယ် အောက်မေ့တာ..၊ မျက်စိကိုပွတ်၊ အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူ၊ ပြူတင်းပေါက် အပြင်ဖက်က မြင်ကွင်းစိမ်းစိမ်းတွေကို ငေး..၊ ပြီးမှ တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်တယ်၊ အဲဒါမှ ပိုဆိုးသွားရော...၊း)
ဤစာစုများသည် ပို့စ်မော်ဒန်လော? မော်ဒန်ပို့စ်လော? ဟုခေါင်းကုတ် စဉ်းစားရင်း ထိုဇတ်ကောင် သွားခဲ့သော ဆရာဝန်၏ လိပ်စာကို တောင်းချင်စိတ်များ ဖြစ်သွားမိခဲ့သည် (ဟု ထင်သည်)။း))
Nwai La July 17, 2012 at 9:57 PM
ကျွန်တော် တော်တော်ပိန်းတယ် ထင်ပါတယ်
Anonymous July 18, 2012 at 9:53 AM
( ဟု ) ထင်သည်
မိုးငွေ့........ July 18, 2012 at 12:33 PM
ဆဌမ အာရုံရနေတာများလား.. ဒန်တယ်ဗျာ..တကယ်ဒန်တယ်...း))